Sunday May 19, 2019 - 14:34:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Kenya oo ay Soomaaliya ka joogaan kumanaan askari oo qeyb ka ah howlgalka loogu magacdaray "AMISOM" ee ay Shisheeyuhu ka wadaan wadankan, ayaa waxaa aad u kordhey miizaaniyadda ay ku bixiso arimaha milliteriga.
Warbixin uu daabacay machad ka faallooda arimaha Nabadgeliyada iyo Amaanka oo magaciisa loo soo gaabiyo SIPRI, ayaa lagu sheegay in miizaaniyadda dowladda Kenya ay ku bixiso arimaha milliteriga ay ka badatnaahy isku darka miizaaniyadda dowladaha Uganda iyo Tanzaniya ee ay ku bixiyaan ciidamada.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in miizaaniyadda dowladda Kenya ay ku bixisay ciidamadeeda sanadkii lasoo dhaafay ee 2018-ka ay gaartay lacag dhan 109.7 bilyan oo shilin.
Waxay ka dhigantahay in miizaaniyadda milliteriga Kenya ay ku korortay lacag dhan 8.2 billion, maadama sanadkii 2017-ka ay ahayd oo keliya 101.5 billion oo shilin.
Arinta la yaabka leh waxay tahay, warbixinta uu soo saaray machadka SIPRI-na lagu sheegay in isku darka miizaaniyadda dowladaha Uganda iyo Tanzaniya oo deris la ah Kenya aaney dhameyn qarashka ay dowladda Kenya ku bixisay arimaha milliteriga.
67.5 billion oo shilin ayaa lagu sheegay miizaaniyadda milliteri ee dowladda Tanazaniya, sanadkii lasoo dhaafay, halka Uganda-na ay gaartay lacag dhan 40.8 billion oo shilin, marka la isku darana waa 108.3 billion, halka dowladda Kenya oo qura ay noqotay 109.7 billion oo shilin.
Marka laga hadlo sababaha keenaya kororkan xad dhaafka ah ee ku yimid miizaaniyadda milliteriga Kenya ayaa dadka khubarada ah ee ka faallooda arimaha Siyaasadda waxay sheegayaan iney tahay dagaalka ay Kenya kaga jirto Soomaaliya, iyo weerarada ka dhacaya gudaha dalkeeda.
Maadaama dowladda Kenya ay xuduud beenaad la wadaagto Soomaaliya, ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab-na ay ka howlgalaan dhulalka ay Muslimiintu leeyihiin ee Kenya ay heysato, waxaa sahlan iney la kulanto weeraro abaabulan oo xoogan, sida Westage iyo Riverside oo ay fulisay Xarakat Ash-shabaabil Mujaahidiin.
Dhinac kale, Diyaaradaha hellecopters-ka iyo gawaarida gaashaman ee dowladda Kenya ay kasoo gadaneyso wadamada reer galbeedka ayaa aad u batay, waxaana keenaya sida ay sheegayaan warbixinnada la helayo qaraxyada lagu burburinayo gawaarideeda, marka ay isaga kala gudbayaan deegaannada ay xooga ku joogaan.
Dowladaha Yurub iyo Maraykanka oo horay Kenya ugu ballanqaaday iney ku taageerayaan duulaankeeda Soomaaliya, ayaa ka baxay ballamo badan oo ay qaadeen, waxaana hadda dowladda Kenya kusoo furmey culeesyo badan, taas oo dhalisay in su’aalo la iska weydiiyo inta sano ee ay sii wadi karto duulaankeeda gardarada ah ee Soomaaliya ay ku joogto.
Saraakiil Mareykan ah oo la jooga ciidamada Kenya.
Shacabka Kenya ayaa qaati ka taagan dhaqaale xumida baahsan ee soo foodsaartay, maadama dhaqaalaah ugu badan ay dowladdu ku bixiso arimaha milliteriga, waxaana arintaas darteed kordhay dadka is dilaya, sababo la xiriira duruufaha nolosha.
Warbixin rasmi ah oo ay baahiyeen warbaahinta Kenya ayaa lagu sheegay in tirada dadka naftooda dilay ee Kenyaatiga ah ay aad u kordheen sanadkii lasoo dhaafay, iyagoo gaaray 70 ruux.
Dadka is dilaya ayaa ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaa kamid ah dhalinyaro, waayeello iyo xitaa dumar, waxaana is dilitaankooda loo sababeeyey culeesyo dhanka nolosha ah oo soo food saaray.
Muwaadin Kenyaati ah oo ka tarjumaya duruufaha heysta shacabka.
Masuuliyiin katirsan dowladda Kenya oo booqasho ku tagay deegaannada ugu badan ee ay ka dheceen falalkan ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee keenaya in dadku ay naftooda dilaan ay tahay duruufo dhanka Maaliyadda iyo nolosha ah.
Siyaasiyiinta Kenyaatiga ayaa marar badan soo jeediyay in ciidamadooda laga soo saaro dalka Soomaaliya, madaxda Kenyaatigana ay joojiyaan musuq maasuqa, arimahaas oo haddii la helo ay suuragaltahay iney wax iska bedesho nolol xumida heysata shacabka Kenya.